Isihluzi sasekhaya se-HEPA: yintoni, yenziwe njani kwaye yeyantoni | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
isihluzi esenziwe ekhaya HEPA
Ukufumana umoya ococekileyo kwiindawo ezivaliweyo ekhayeni lakho, kwindawo osebenza kuyo kwaye ngokubanzi kubalulekile kwimpilo yethu. Nangona singenakuzibona, kukho amasuntswana amaninzi axhonywe emoyeni anokubangela ukwalana nokugula. Ke esi sifundo siya kukubonisa inyathelo ngenyathelo ukuba ungakha njani ngokukhawuleza nangokulula isicoci somoya sasekhaya ngaso isihluzo sehepa esenziwe ekhaya.
Kweli nqaku siza kukuxelela indlela yokwenza isihluzo se-HEPA esenziwe ekhaya kunye nokuba yintoni iluncedo.
1 ungcoliseko lomoya ekhaya
2 Yintoni isihluzo se-HEPA sasekhaya
3 Usenza njani isihluzo se-HEPA esenziwe ekhaya
4 Indlela yokukhetha i-fan yokukhupha
5 Iingcebiso zomgangatho womoya olungileyo
ungcoliseko lomoya ekhaya
Sidla ngokuthatha lula ukuba umoya osemakhayeni ethu okanye kwindawo esisebenza kuyo awungcolisekanga kangako kunomoya ongaphandle. Nangona kunjalo, ngaphandle kolu ngcoliseko lusasazeka ngakumbi, kwaye kwiindawo ezivaliweyo sichanabeka kuxinzelelo oluphezulu lweekhompawundi eziyityhefu ezinje:
Izingcolisi eziZingisayo (iiPOPs)
IiCompounds eziVolatile Organic (VOCs)
Ibisphenol A (BPA)
IiCompounds ezinePerfluorinated (PFC)
Iintsholongwane, iintsholongwane, iintsholongwane, iintsholongwane, njl.
Izicoci zomoya zasekhaya zilungile ekulweni ukungcoliseka komoya kunye nokuphucula umgangatho womoya wena nosapho lwakho niwuphefumla yonke imihla.
Yintoni isihluzo se-HEPA sasekhaya
Isihluzi seHEPA Yinkqubo yokugcina amasuntswana aguqukayo akhoyo emoyeni, Ngokuqhelekileyo yenziwe nge-fiberglass. Ezi ntsinga zicwangciswe ngokungacwangciswanga zicoleke kangangokuba zenza uthungelwano olugcina imixube engcolisayo.
I-HEPA imele “i-High Efficiency Particle Arrester”, ethetha ngokuthe ngqo “I-High Efficiency Particle Arrester” ngeSpanish, kwaye zikwabizwa ngokuba zizihluzi ezipheleleyo. Zayilwa yiNkampani ye-Cambridge Filter ngo-1950 ukuze zisetyenziswe kwishishini lomkhosi ngokukodwa ukulwa nongcoliseko olwenziwa xa ibhombu yeathom yenziwa.
Okwangoku izihluzi ze-HEPA zisetyenziswa kuyo yonke imimandla: ishishini lokutya, i-electronics, amayeza, imichiza, amayeza kwigumbi lokusebenza, ukuhlaziya umoya kwinqwelo-moya nasekhaya. Ngokubanzi, naphi na apho ucoceko lomoya ophezulu lufuneka.
Nangona imicu iphakathi kwe-0,5 kunye ne-2 ye-microns ububanzi, i-meshes ecwangciswe ngokungenamkhethe igcina amasuntswana amancinci ngeendlela ezintathu: Xa umoya othwele amasuntswana udlula kuwo, amasuntswana ancamathela kumnatha njengoko ekhuhla kwimicu. Amasuntswana amakhulu angqubana ngqo nemicu. Ekugqibeleni, ukusabalalisa, okuhambelana nokunyakaza okungahleliwe kweengqungquthela kumanzi, kunegalelo ekunamatheleni kwabo.
Usenza njani isihluzo se-HEPA esenziwe ekhaya
Izicoci zomoya zasekhaya okanye oomatshini abahlaziyiweyo banokuhluza umoya njengabo bafumaneka evenkileni yezixhobo zombane, kodwa oko kuyabiza. Izinto ezifunekayo ekwakhiweni kwayo zezi zilandelayo:
Ungasebenzisa i-fan yokukhupha yokuhlambela okanye enye esetyenziselwa ukukhupha umoya kumagumbi avaliweyo.
Isihluzi se-HEPA 13. Zinokuthengwa njengeendawo ezisecaleni kwizicoci ze-vacuum kunye nezixhobo zomoya.
Ibhokisi yekhadibhodi enesiciko. Kunconywa ukusebenzisa ikhadibhodi ukwenza isicoci siqine ngakumbi.
Iimela kunye/okanye izikere.
Iplagi ngentambo kunye ne-tape yokukhusela.
Uninzi lwezihluzo ze-HEPA Zenziwe ukusuka kumaphepha aqhubekayo okudibanisa i-fiberglass blends. Izinto ezibaluleke kakhulu ezinokuthi ziqwalaselwe kolu hlobo lwesihluzi yi-diameter ye-fibers, ubukhulu bokucoca kunye nesantya samasuntswana. Ukongeza, isihluzi sinokalisho (ukalisho lwe-MERV) olusekwe kubuchule baso bokubamba amasuntswana obungakanani obunikiweyo:
17-20: ngaphantsi kwe-0,3 microns
13-16: 0,3 ukuya kwi-1 micron
9-12: 1 ukuba 3 microns
5-8: 3 ukuba 10 microns
I-1-4: Ngaphezu kwe-10 microns
Ngaloo ngqiqo, Isihluzo se-HEPA 13 okanye isihluzo sothuli se-H sithatha i-99,995% yamasuntswana amakhulu kune-0,3 ye-microns eyingozi empilweni.. Ke ngoko, zifaneleke kakhulu ukucoca i-spores yokungunda, iintwala zothuli, i-pollen, uthuli lwe-carcinogenic, i-aerosols, kunye neentsholongwane ezinje ngebhaktheriya kunye neentsholongwane.
Kwelinye icala, ukusebenza kwayo kubandakanya ukubamba amasuntswana ayingozi ngokusebenzisa:
Uthintelo lokuhamba komoya: Amasuntswana akhuhla ngokuchasene kwaye abambelele kwimicu yesihluzo.
Ukubetha ngokuthe ngqo: Amasuntswana amakhulu ayangqubana aze avaleleke. Incinci isithuba phakathi kwemicu kunye nesantya somoya, isiphumo esikhulu.
Ubunzima: Amasuntswana amancinci angqubana nezinye iiathomu, ezithintela ukuba zidlule kwisihluzo. Ngokuqhelekileyo kwenzeka xa ukuhamba komoya kucotha.
Indlela yokukhetha i-fan yokukhupha
I-extractor fan ibalulekile kwigumbi elingenamoya kwaye iyinxalenye yesicoci somoya. Xa ukhetha, le miba ilandelayo kufuneka ithathelwe ingqalelo:
Ukuhamba komoya kufuneka kuqinisekise ukungena komoya okwaneleyo kunye nokutsalwa. Ngokuqhelekileyo, oku kufanele kube sisi-6 ukusa kwali-10 umthamo wegumbi lilonke ngeyure, nangona kunconyelwa isi-4 ukuya ku-5 kumagumbi okufundela namathala eencwadi, asi-6 ukuya kwayi-10 eziofisini nakumgangatho ongaphantsi, nesi-10 kumagumbi okuhlambela nasemakhitshini. 15 Ukubala i-extractor, kufuneka uphindaphinde i-m3 yegumbi (ubude x ubude x ububanzi) ngenani lokulungiswa okufunekayo ngeyure. Ngokomzekelo, igumbi le-12 m2 kunye nobude be-2,5 m (30 m3) lifuna izinga lokuhamba kwe-120 ukuya kwi-150 m3 / h, ngelixa i-ofisi ye-cubic meter efanayo idinga ukuhamba kwe-180 ukuya kwi-300 m3 / h.
Amandla e-extractor ahlala phakathi kwe-8 kunye ne-35 W, kunye ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kwigumbi apho iya kufakwa khona. Ekhitshini, umzekelo, amandla amaninzi afunekayo ngenxa yomsi owenziwe xa ukutya kulungiselelwa.
Amanqanaba engxolo akufanele abe ngaphezu kwee-decibels ezingama-40 ukuze angacaphukisi, kodwa khumbula ukuba okukhona amandla aphezulu, kokukhona kuya kuveliswa ingxolo.
Iingcebiso zomgangatho womoya olungileyo
Ukongeza ekwakheni isicoci sakho somoya, kuyacetyiswa ukuba ulandele uluhlu lweengcebiso eziya kunceda ukuphucula umgangatho womoya kulo naliphi na igumbi:
Vula iifestile rhoqo ukuze kungene umoya. Ukuba akukho zifestile, kufuneka kubekho umoya wokungena ngoomatshini.
Khulisa izityalo zangaphakathi ezinceda ukucoca kunye nokuphucula umgangatho womoya.
Isusa ukufuma okugqithisileyo ukukhusela ukungunda kunye nokwakheka kokungunda, ngakumbi kwiindawo ezifana nezindlu zangasese.
Ikhusela ukuqokelelwa kothuli kunye nokucoca iikhemikhali, ukukhetha iimveliso ezingakumbi zendalo ezifana neviniga kunye nesoda yokubhaka.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokwenza isihluzo se-HEPA sasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » isihluzi esenziwe ekhaya HEPA